Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Maxamed C/llaahi Farmaajo oo shir guddoominaya Wejiga Labaad ee shirkii london oo maanta si rasmi ah uga furay Muqdisho ayaa ka hadlay muhiimada ay leedahay in la xoojiyo taageerada Ciidanka Xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dagaalka ka dhan ah kooxaha dowlada kasoo horjeeda.
Sidoo kale,Waxaa madasha ka hadlay madaxda maamul Goboleedyada dalka,kuwaasoo sheegay iney door muhiim ah ka qaadan doonaan sugida amaanka dalka iyo in la xoojiyo Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed.
Hogaamiyaha Puntland C/wali Maxamed Cali Gaas ayaa sheegay iney diyaar u yihiin iney qaataan doorkooda ku aadan dhismaha Ciidamada Qaranka.
Axmed Madoobe,Hogaamiyaha mamulkaJubbaland oo isna ka hadlay Wejiga Labaad ee shirkii London ayaa tilmaamay iney muhiim tahay in la dhaqan geliyo go’aamada ka soo baxa shirkaan.
Hogaamiyaha Maamul Goboleedka Koonfur galbeed Soomaaliya Shariif Xasan Sheikh Aadan ayaa qeexay iney muhiim tahay in la waqtiyeeyo qorshaha Amniga Qaranka iyo sida loo tababarayo Ciidanka ayna ula wareegayaan amniga wadanka.
Axmed Ducaale Geele Xaaf,HogaamiyahaGalmudug oo khudbad ka jeediyay shirka ayaa sheegay in kuwa lidka ku ah dowlada iyo Burcadbadeeda in awooda la wiiqay,isagoo hadalkiisa intaasi ku daray in Galmudug ahaan guul ay ka gaareen shirkii wada hadalka ee ka dhacay dalka Jabuuti,isagoo carabka ku dhuftay in dhawaan ay tagayaan magaalada Dhuusa-mareeb.
Hogaamiyaha Maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare oo si kooban shirka uga hadlay ayaa shaaca ka qaaday in kooxaha dowlada kaso horjeeda ay sii liidanayaan,islamarkaana uu gabalkooda uu sii dhacayo,isagoo cadeeyay in la heysto wado cad oo lagu horumari karo,” Waa in aan dayacin fursadaha aan heysano maanta”,ayuu yiriHogaamiyahaWaare
Dhanka kale,Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa magaalada xamar ayaa sheegay in loo baahan yahay in si wadajir ah looga shaqeeyaa dagaalka ka dhan ahkoxaha lidka ku ah dowlada,wuxuuna sidoo kale tilmaamay in Qaraxii 14-kii October ka dhacay xamar uu ahaa mid Xanuun badan oo muujiyay dhibaatada Cadowga,isagoo hadalkiisa intaasi raaciyay in loo baahan yahay in maamulka Gobolka Banaadir lagu wareejiyo Amniga Gobolka,wuxuuna sheegay iney sameeyeen qorshe hordhac ah oo lagula soconayo Amniga ilaa iyo heer degmo.
Xildhibaanno ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo shirka baarlamaannada Afrika hor dhigay ajande muhiim ah.
DHAGEYSO;-Baladweyne Oo Laga barakacayo